ပစ်ကြမယ်ဟေ့ ဒိုင်းညောင့် Draft Service | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ပစ်ကြမယ်ဟေ့ ဒိုင်းညောင့် Draft Service
ပစ်ကြမယ်ဟေ့ ဒိုင်းညောင့် Draft Service
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 10, 2011 in Community & Society, Critic, Legal Information/Visa | 38 comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရက စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ ပြဌာန်းလိုက်ပြီလို့ သတင်းဌာနများက ဆိုပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း တရားဝင်တော့ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ကောင်းကင်က ကြယ်တာရာ နက္ခတ်များမစုံသေးလို့ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ကနဦးတုံ့ပြန်ချက်တွေအရ ၂၀၀၈ နာဂစ် အခြေခံဥပဒေမှာ ပြဌာန်းထားလို့ ခေါ်ယူတော့မဲ့ မဲခိုးလွှတ်တော်ကသာလျင် ပြဌာန်းပေးရမှာလို့ ပြောတာဖတ်ရပါတယ်။ အားလုံးလိုလိုက လက်ညိုးထောင်ခေါင်းညိမ့် လုပ်မဲ့အတူတူ လွှတ်တော်အမတ်များ လက်ညောင်း ဇက်ညောင်း သက်သာအောင် အချုပ်မှူးးကြီးက စေတနာနဲ့ ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပုံ ရပါတယ်။ ယောက်ျားလေးဆိုအသက်၁၈နှစ် ကနေ ၄၅နှစ်အထိ၊ မိန်းခလေးဆို အသက်၁၈နှစ်ကနေ ၃၅နှစ်အထိ ၂နှစ်မှ၃နှစ်အကြာ စစ်မှုထမ်းရမဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျက်ကွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ထောင်ဒဏ်၅နှစ်အထိ ကျခံရပါလိမ့်မယ်။ တချို့ကတော့ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ နိုင်ငံသားတိုင်း စစ်ပညာတတ်ရန် နိုင်ငံတကာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ စံညွှန်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နယ်စပ်ဒေသက ပြည်တွင်းစစ်အတွက် စစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာ မဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ ပြည်ပရောက်နေပြီဖြစ်လို့ ကုလားပဲဟင်းစားပြီး နေပူထဲအလုပ်ကြမ်းလုပ်ရဖို့ စိတ်ပူခြင်းအလျဉ်းမရှိပါဘူး။ ရေးဖေါ်ရေးဖက် ညီတော်ညီမတော်များ အတွက်တော့ စိတ်ပူမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ဆင်ဖမ်းမယ် ကျားဖမ်းမယ် ဥပဒေအမျိုးမျိုးထုတ်ပြီး နောက်ဆုံး ပိုးဟပ်နဲ့ကြွက်တောင် ဖမ်းနိုင်စွမ်းမရှိတာမို့ ကိုယ့်လူတွေ အရှောင်အတိမ်း ဂျက်ဆီဂျိမ်းနည်းများကို သေချာပေါက် သိကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ယူအက်စ်မှာတော့ နိုင်ငံသားနဲ့ အမြဲနေခွင့်ရသူများ အမေရိကားမြေပေါ် နင်းတဲ့အချိန်မှာ အသက်၂၇နှစ် မကျော်သေးရင် စစ်မှုထမ်းနိုင်ဖို့ selective service ဆိုတဲ့ ဖောင်ဖြည့်ရပါတယ်။ မလုပ်မနေရတော့ မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ ကျောင်းတက်ဖို့ အစိုးရဆီကငွေချေး၊ အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေလျောက်၊ အစိုးရအထောက်အပံ့ကို တနည်း တဖုံးခံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီဖောင် ဖြည့်ရပါတယ်။ သတ်မှတ်အသက်ကျော်သူများလည်း အဲဒီအခွင့်အရေးတွေယူထားခဲ့ရင် လိုအပ်တဲ့အခါ အသက် ၅၀လားမသိဘူး မကျော်သေးရင် အစိုးရရဲ့ စစ်မှုထမ်းဖို့ draft service ကိုလိုက်နာပါမယ်လို့ ဝန်ခံကတိပြုရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား၊ အီရန်စတာတွေနဲ့ တပြိုင်နက်ထဲ စစ်ဖြစ်ရင် အပြင်မှာ လတ်ယားလက်ယား ကော့ကန်ကား လုပ်နေတဲ့သူတွေ အတော်များများ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ရမှာပါ။
တဆက်ထဲမှာ ဘာကြောင့် စစ်တပ်အနေနဲ့ အခုလိုခြေလှမ်းလှမ်းရသလဲလို့ တွေးမိပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ဦးနှောက်သုံးရတဲ့အလုပ်မျိုးဆို မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ မလုပ်ရဲဘူး ဆိုရင်ပိုမှန်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်တတ်တာ ရန်သူစစ်စခန်းကို ထိုးစစ်ဆင်ရင် အင်အား၃ချိုး၁ချိုး ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်အတိုင်း ကောင်းတာမကောင်းတာ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များထက် လောလောဆယ်နိုင်ဖို့ကိုပဲ အာရုံထားပါတယ်။ အခုကိစ္စဟာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအတွက် အကောင်းဆုံး အနေအထားတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း စစ်မှုထမ်းရရင် စစ်တပ်ရဲ့ လက်ရှိဖက်ဆစ် အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ပျက်ဆီးသွားနိုင်လို့ပါပဲ။ ငတ်လို့၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်၊ အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရလို့၊ တပ်ပြင်ထွက်လည်း ဘာမှလုပ်မစားတတ်တော့တဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုး ဝါရင့်စစ်သားများကိုသာ လက်ရှိပုံစံနဲ့ အုပ်ချုပ်လို့ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်တာကတော့ စစ်ထဲမဝင်လိုသူများထံမှ ဆက်ကြေးကောက်ခြင်း၊ နီးစပ်ရာတပ်စခန်းများ ဆီကိုပို့ပြီး တပ်သက်သာချောင်ချိရေး လုပ်အားပေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်စေခြင်း စတာတွေကို အဓိကထားလုပ်မှာဖြစ်ပြီး စစ်ပညာကိုတော့ ဘယ်ညှိညာညှိ၊ နေပူထဲစစ်ရေးပြ လမ်းလျောက်လောက် စတာလောက်သာ လုပ်ခိုင်းဖို့များပါတယ်။ စစ်တပ်သည် သိတဲ့အတိုင်း ငွေလိုနေပါတယ်။ ဓါတ်ငွေ့၊ သစ်တော၊ ကျောက်မျက် အခြားသယံဇာတက ရတဲ့ငွေမာတွေအားလုံးလိုလို့ သူတို့အိပ်ထဲရောက်၊ ကျန်တာတွေကလည်း ညူကလီးယားဗုံးထွင်၊ စစ်လက်နက်ဝယ်တဲ့ အထဲရောက်ကုန်လို့ စစ်တပ်ကြီး သက်ဆိုးရှည်ဖို့ ဝင်ငွေအကြီးအကျယ် လိုနေပါတယ်။ ရနိုင်သမျှ စားပေါက်တွေကလဲ ကုန်ပြီဆိုတော့ လူထုဆီက အေးဓမြတိုက်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ခိုင်းလို့ရသူတွေ၊ ဦးနှောက်ဆေးပေးထားသူတွေ လောက်ကိုသာ စစ်တိုက်ဖို့သုံးရဲပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အဓမ္မလုပ်အားပေး၊ ပေါ်တာဆွဲ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကလည်း စစ်တပ်ရဲ့အစဉ်အလာအတိုင်း ရှိမြဲဆက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
တကယ်၍များ အကောင်အထည် ပေါ်လာခဲ့ရင် မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူ လူငယ်များ ဒီအခွင့်အရေးကို ရနိုင်သမျှ အသုံးချပါ။ စစ်တပ်၏ သဘောသဘာဝကို နားလည်အောင်လုပ်ပြီး ပြည်သူနဲ့ တသားထဲ ဖြစ်အောင် စည်းရုံးတတ်ကြပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း အခြေခံစစ်ပညာ၊ အမိန်နာခံတတ်မှု၊ အဖွဲ့အစည်း စိတ်ဓါတ်၊ ပင်ပန်းဆင်းရဲခံနိုင်မှု စတာတွေကို လေ့လာကြပါ။ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံများမှာ စစ်မှုမထမ်း မနေရ ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တက်နေရင် ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ဆိုင်းပေးတယ် ထင်ပါတယ်။ ပညာအရည်အချင်းလိုက်လို့ ထမ်းဆောင်ရတဲ့ တာဝန်ရာထူး ကွာခြားပါတယ်။ စင်္ကာပူလူမျိုးတဦးက စစ်မှုထမ်းအတွေ့အကြုံဟာ သူ့ဘဝအတွက် အလွန်ကောင်းတယ်လို့ ပြောတာ ကြားဖူးပါတယ်။ တခါ မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရဝန်ထမ်းများ ရက်ရှည်ဖောင်ကြီးသင်တန်း တက်ပြီးပြန်လာရင် ယူတတ်သူများ အလွန်အကျိုးရှိတာ သိရပါတယ်။ လက်တွေ့ဘဝကို တကယ် ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရလို့ပါ။ ဆရာ မင်းသိင်္ခ ဝတ္တုတွေထဲက ဇာတ်လိုက်မင်းသား မကြီးပွားခင်၊ သိဒ္ဓိ မဟိဒ္ဒိမပေါက်ခင် ထောင်ထဲအရင် ရောက်ရတာ သတိရမိပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ညီအကို ညီအမများရော ဘယ်လိုတုံ့ပြန် ထင်မြင်ချက် ရှိကြပါသလဲ။
လစာ၊ ရိက္ခာ၊ ခံစားခွင့် (တရားဝင်)၊ ယူနီဖောင်းတွေက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာ (စင်ကာပူ၊ ကိုရီးယား၊ အမေရိကား၊) တို့လိုမျိုးပေးနိုင်ရင်ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။
သေ နတ် ရ ရင် တေ ဇ တို့ဇော် ဇော် တို့ကို ဒ မြ ပြန်တိုက် မယ်
ယောက်ကျားPP သတ္တိရှိရှိ စစ်ထဲဝင်ကာရယ်
ဂိတ်ဖွင့် အကောက် ကောက်ပြီး
တိုင်းပြည်တွက် ဝင်ငွေ တစ်ဖက်တလမ်းရှာပေးမယ်
စောက်ရူးဦးဏှောက်နဲ့ ဘာတွေကြံနေပြန်ပြီလဲမသိဘူးနော် ။ ဒီကောင်ကြီး မြန်မြန်သေမှာ အေးမယ် ။
အဲဒီဥပဒေအတည် မဖြစ်ခင် Spass ရအောင်လျှောက်ရမယ်
စစ်တပ် ဆရာဝန်များ….(ဂွင်)ခွင်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ စစ်ထဲမ၀င်ချင်တော့ ဆေးကျအောင်လုပ်ရမယ်..။ ဆေးကျအောင်လုပ်ဖို့ ဒင်းတို့ကို ပိုက်ဆံပေးရမယ်.။….. နောက်ပြီး ဒါကတော့ တရားဝင် ပေါ်တာဆွဲတာပါပဲ..။
ပြီးရင် .စစ်ထဲဝင်ရတဲ့.လူတွေကို ၀ါးရင်တုတ်ပဲပေးကိုင်ပြီး မိုင်းကွင်းထဲ ရှေ့ဆုံးကနေဖြတ်ရမယ် နဲ့တူပါတယ်..။ …အော် တစ်တိုင်းပြည်လုံး အသေများသတ်နေကျလားမသိဘူး။ နောက် အပြင်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…ကုမ္ပဏီတွေက ကိုယ်စစ်ထဲဝင်တဲ့ ၂ နှစ် ၃ နှစ်ဆိုတာ ကို ဘယ်သူမှ စောင့်ပြီး အလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး…။ စိတ်ညစ်တယ်ဗျာ.။
ဲJanuary 31 မှာလွှတ်တော်ဖွင့်ပွဲလုပ်ပြီးတာနဲ့၊ဖြုတ်ထုတ်သတ်ဥပဒေတွေဟွောတခုဟောတခုနဲ့လူသန်းပေါင်းများ
တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့ ဗမာပြည်မှာစစ်သားတွေလိုလာမယ်၊ အဲဒီအခါ ဗမာတိုင်း၊အရွယ်ရောက်သူတိုင်း၊ကျမ်းမာရေးနှင့်ပြည့်စုံသူတိုင်း စစ်မူထမ်းဖို့ လုပ်ရမယ်။ခင်ဗျားတို့ တိုက်ချင်ချင်မတိုက်ချင်ချင် တိုက်ကိုတိုက်ရမယ်။အဲဒါမှ လွတ်လပ်ရေး တာဝန်ကျေမယ်။
ပညာတတ် တွေကို ဘာမှ မတတ်တဲ့ တပ်ကြပ် ဆိုတဲ့ ကောင်တွေ ကအာဏာ ပြကြ မယ်။
မိန်းကလေး တွေဆို အပိုင်ကြံမယ်( သူတို့ ဘာသာ ဆို ပညာတတ် မိန်းမရဖို့မလွယ်၊ )
ယောက်ကျား ဆိုရင် ”The Hell”ဆိုရင် တော့သေပြီနော်။ Jean-Claude Van Damme ကားလေ ၊သိတယ်မလား။
Nowadays in the army, most of the low-rank soldiers are uneducated and have no brain.
They will bully the well educated ones.
Moreover, they haven’t seen such nice girls like the educated women and consequently , there may be sexual offenses.
ဒီဥပဒေ ကို လုံးဝ ကန့်ကွပ်ပါတယ်။ တော်ကြာ မကြီးမငယ် နဲ့ ကလေး စစ်သား စာမတတ် တဲ့ ကောင်တွေ အနိုင်ကျင့်တာ ခံ နေရအုံးမယ်။
ဟားဟား…. ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်၊ ဖြစ်နိုင်တယ် ဗျို့….
သိပ်ပြီးလည်း စိတ်ကူးမယဉ်ကြပါနဲ့အုံး။ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ကို ဗိုလ်သန်းရွှေက သေနတ်ပေးကိုင် ခိုင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်နေသလား၊ ၀ါးရင်းဒုတ်တွေပေးပြီး သူရဲ့နေပြည်တော်က ရွှေနန်းတော်အသစ်ကြီးထဲမှာ ခေတ်သစ်ဦးအောင်ဇေယျ အဖြစ်စံမြန်းတော်မူအုံးမှာပါ။
စဉ်းစားမိတာကတော့ မြို့ပေါ်က လူငယ်တွေ ကျန်းမာရေး မကောင်း တော်တော် ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ရှောင်မရ တိမ်းမရ လူတွေ တောနေလူတွေ ပညာနည်းသူတွေ မဖြစ်မနေ ၀င်ကြမယ်။
ချူချာချင်ယောင်ဆောင်နေမှ… တားက အညင်အာရုံ ကောင်းဝူး….
သိချင်လို့.. ကျန်းမာ သန်စွမ်းသူ ဆိုတော့.. နေမကောင်းသူတွေ လက်မခံဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့နော်..
ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ သူတွေ ထဲမှာ… အေ ဘီ စီ ကော ပါသလား။
ဘဘ said: On January 10, 2011
ပြောသလိုပဲဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါတော့ စိုးရိမ်မိတယ်။ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာတွေဖြစ်နေကျပြီလည်းဗျို့လုပ်ကျပါအုန်းဗျ။ပြည်သူတွေ အားလုံး ဒီလိုပဲ ထိုင်ကြည့်နေကျတော့
မှာလားဗျာ။စကားမဆက်ပါနော်……ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းတယောက် စစ်ထဲကိုဝင်ဖူးပါတယ်။
သူ့အသက် 19 ပါ။၀င်တယ်လို့ပဲ စကားလှလှပေးပြောကျတာပေါ့။ရွှေရောင် အတွက်အစိုးရစစ်တပ်ကနေသူ့ကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာလေ။သူအခု ကံကောင်းထောက်မစွာတဲ့
တပ်နေရာ အမျိုးမျိုးကို ပြောင်းပြီးတော့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပါတယ်။
နောက်ထပ် ကံကောင်းစွာပဲ အိမ်ကလူတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်တွေပါပေးလာပါတယ်။ကျွန်တော့ကို သူ့အိမ်ကလူတွေက ငိုယိုပြီးတော့ပြောတယ်။ယောင်္ကျားအချင်းချင်း ကာမ အဖြစ်သူတို့ရဲ့
သားကို တပ်ထဲမှာ ၀ိုင်းလုပ်ကျတယ်တဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လို 19 နှစ်အရွယ် ယောင်္ကျားလေးတွေ
အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ အများဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ဒီဥပဒေကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။
ကျနော် လဲ အဲမျိုးတွေ ကြားဖူးနေတာ ကြာပါပြီ။ ဗို သင်တန်းမှာတောင် အချင်းချင်း အနိုင်ကျင့် တာတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့ဆို သေသွားတာတောင်ရှိပါတယ်။ ခုဟာ ကမိန်းကလေး တွေ ပါ ပါမှာဆိုတော့ ပိုဆိုးမှာ ပေါ့။ ဟိုလူတွေ ကမိန်းမ ဆို ကောင်းကောင်း(အဲလိုပဲပြောတော့မယ်) မြင်ဖူး တာမဟုတ်။ အနိုင်ကျင့် စော်ကားမှု တွေ အများကြီး ပေါ်လာနိုင် ပါတယ်။ ပိုကြောက် ဖို့ ကောင်းတာက ဒီမှာ ကဘာလုပ် လုပ် သေချာ လုပ် တာ ဘယ်နခါ မှမရှိဘူး ၊ အင်း တွေး ရင်းစိတ်တွေပို ပူလာပြီ ၊
အော်… မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေလဲ တဆင့်ပြီးတဆင့် နှိပ်စက်တာခံနေရတာပါလား။
ဖြစ်နိုင်ပါဘူး အဲဒိလိုဆိုရင် လက်ရှိရှိနေတဲ့သူတွေကို ထွက်ချင်ရင်ထွက်ခွင့်ပေးရတော့မှာပေါ့ ရှိနေတဲ့သူတွေက ထွက်ခွင့်သာရလို့ကတော့ ကျန်မှာတောင်မဟုတ်ဘူး ဒီအတိုင်းတောင်ထွက်ပြေးနေကြသေးတာ
ယ္ခု နောက်ဆုံးရတဲ့ ၀မ်းသာစရာ သတင်းကတော့ ရုပ်ဆိုးသူများကို စစ်မူမထမ်းစေရဘူး ဟုသိရပါတယ်။
သေသေချာချာသိချင်ရင်တော့ Burma Strange News.com်ကြည့်လိုက်ပါ။
တော်ပြီဗျာ … လူမဖြစ်ချင်တော့ဘူး
ကိုရီးယားက နာမည်ကြီး pop အဆိုတော် ရိမ်းတောင် နှောင်နှစ်စစ်မူ့ထမ်းရတော့မယ် စစ်မူ့ထမ်းတယ် ဆိုပေမဲ့ အခြေခံ စက်မူ့ ၊ လျှပ်စစ် ပညာ နဲ့ မိန်ခလေးဆိုရင် သူနာပြု့ ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင် ရာသင်တန်းတွေ ပါမယ်ထင်ပါတယ်.
ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ တိုင်းနီးပါး
အရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်မှု မထမ်း မနေရ ထမ်းတာမျိုးလုပ်ကြရပါတယ်။
ဒါ ကိုတော့ သဘောကျပါတယ်။လက်မခံနိုင်စရာမရှိသလို ငြင်းစရာလဲမရှိပါဘူး။
ပြည်သူတိုင်း ကျား/ မ အားလုံး စစ်ရေးဝတော့ တိုင်းပြည်အတွက် လုံခြုံ စိတ်ချရတာပေါ့။
သေနတ်ကိုင်ဖူးသွားတော့လဲ မတရားမှုတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့ နေရာမှာ
သေနတ်ဆိုတာကြောက်စရာ လက်နက်တစ်ခု့ လို့ မြင်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
၀န်ထမ်းတွေကို ဖောင်ကြီးတက်ခိုင်းတုံးကလိုမျိုး စားစ၇ာ ကမရှိ ။ ဖြစ်သလိုနေ ။
အကျဉ်းထောင် အသေးစား ဆန်ဆန်ဆိုရင်တော့။
မီးကြိုးမောင်းပျက် သေနတ်အစုတ်တွေကိုင်ခိုင်းပြီး စစ်ပညာ သင်ခိုင်းအုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့
သူများနဲ့ တန်းတူ ။ မြန်မာပြည်က လူကြီးသားသမီးတွေ ပါ
အင်္ဂလန် က ၀ီလျှံ မင်းသားလို မျိုး စစ်မှု တကယ်ထမ်းမယ်ဆို ရင် တော့ မထမ်းနိုင်စရာမရှိပါဘူး။
လက်တွေ့ မှာပြည်သူတွေ ကိုဘဲ ဒုက္ခ ပေးပြီး ။ ကိုယ့် ကိုမှီခိုပြီးစားသောက်နေရတဲ့ မိသားစု့တွေက စားစရာမရှိ့ 
ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြု အမူတွေ။နဂိုကထဲက မရှိတဲ့ တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့ နေရတဲ့ အထဲမှာ။
စစ်ထဲကို ၂ နှစ်။၃နှစ်။ ထပ်ဝင်ရဦးမယ်ဆိုပြန်ရင်တော့။
မြန်မာပြည်သားတွေ ဘ၀ ရင်လေးစ၇ာပါဘဲ။
၁နှစ်လောက်ဘဲ စစ်မှုထမ်းခိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့ နဲနဲ တော်သေးပါတယ်။
၃ နှစ် လောက် ဆိုရင်တော့
ဘာတွေ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်ကြဦးမလဲ စောင့်ကြည့် ရ မှာဘဲ။
ပြည်သူတွေ အသိပညာ။အတတ်ပညာ ။ အမြင်မှန်တွေရပြီး
ပြည်သူတွေ စာများများဖတ်တတ်ဖို့ ။လက်ညှိုးထောင်ခေါင်းညိမ့် မလုပ်ဘဲ နိုးကြားဖို့ အချိန်တန်ပြီထင်တာပါဘဲ။
အခု့ခေတ်ကြီးမှာ တိုးတက်တဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ စစ်ပွဲတွေ လုပ်နေတာ ။ လူထု့ အင်အားတွေကို သိပ်ပြီးသုံးနေစရာမလိုဘဲ
နည်းပညာ အားကိုးနဲ့ အိုင်တီ ခေတ်ကြီးမှာ ကျမတို့ မြန်မာတွေ လူတော်တွေ အများကြီးပါဘဲ။
အသိပညာရှင်။အတတ်ပညာရှင်တွေ ကို ဘေးထိုင် ချောင်ထိုးမထားဘဲ
လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ရေးသား လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ လူတစ်စု့က လက်ဝါးကြီးအုပ်စိုးထားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ
စနစ်တကျ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်
စစ်မှုထမ်းပြီး စစ်ထဲဝင်တာထက် ကောင်းတဲ့ လုံခြုံ စိတ်ချတဲ့ ဘ၀တွေ ရလာမယ်ထင်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်က ၀ီလျှံ မင်းသားလိုဘဲ လြူ့ကီးသားသမီးပါမကျန် မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ အမှန်တကယ် မကွယ်မ၀ှက်
စာရင်းပါယုံလေးရေးထားပြီး အိမ်ပြန်အိပ်တာမျိုး ။
လူကြီးသားသမီးဗိုလ်လောင်းတွေ လို အခွင့်ထူးခံတွေသာများနေမယ်ဆိုရင်တော့
MRTV_4 ကနေ ပြေတီဦးတို့ မင်္ဂလာဆောင်လို
စစ်မှုထမ်းနေတဲ့ လူကြီးသားသမီးတွေ ကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခိုင်းရမယ်ထင်တာဘဲ။
ဒါတောင်မှ့စတန့် မင်းသား/ မင်းသမီးတွေ ထည့်သုံးလာရင်တော့ ခံပေတော့ ပြည်သူတွေဘဲ။
Bravo Ko Mirror. Good point of views.
သူတို့က အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ် ခွပ်ခိုင်းတော့မယ် ဒါမှမဟုတ် မဟုတ်တာ တစ်ခုခု လုပ်ထားလို့ သူများလာတိုက်ရင် အချောင်သေခိုင်းဖို့ လူစုထားတာဖြစ်မယ် မတရားဘူး သူတို့စစ်တပ်ထဲဝင်လို့ မိသားစုစားဝတ်နေရေးကို သူတို့က ထောက်ပံ့ပေးမှာလား သေစရာရှိရင်တော့ ထိပ်ဆုံးက ပို့မှာသေချာတယ် မယုံရင် နေရွှေသွေးကို ပို့လိုက် စစ်တိုက်ရမယ့်နေရာဆို နေရမှာမဟုတ်ဘူး တကယ်လုပ်ရင် ဘဘကြီးတွေရဲ့ သားသမီးတွေကို စစ်တပ်ထဲအရင်ပို့ ပြီးရင် တပ်သားအဖြစ်နဲ့ နယ်စပ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာပို့ရဲလားလို့ ပြောရင်းနဲ့ စိတ်တိုလာပြီ
NLD ကြည်ညိုသူတွေ စာရင်း သူတို့ဆီမှာရှိတယ်။ ဒီလူတွေကို ရွေးထုတ်ပြီး သုဿန်ပို့ပေးမလို့။ ဒီအတွက်ကြောင့်ပါပဲ။
ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ် မြောက် အောင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ တဲ့ ပါတီတွေ
အ ရပ် သား အစ် စိုးရ ဖြစ် အောင် ဝင် အရွေး ခံ ပေးခဲ့ တဲ့ အမတ် တွေ
ဒိမိုကရေစီလမ်းစဆို ပြီး မဲ ပေးဖို့ တိုက်တွန်: တဲ့ i vote တွေ
တ ခု ခု တော့ ပြောပါ အုံး
အိုး သားသား ကြောက်ကြောက်.
Sate Nyit Lite Tar Naw. Kyar ya dar thay taung thay chin tal. (p.s Thay=Death)
အေဘီစီဒီ လက်မှတ် အမြန်ယူထားမှ ။
ကျနော်တော့ ဘီနဲ့ စီ တစ်ခုခုရွေးရမှာ
စစ်မှုထမ်းရမဲ့ အထဲမှာ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတွေ၊
သားသည် အမေတွေ မပါဘူးမို့လား။
အိမ်ထောင်သည်တွေ မပါဘူးဆိုတာ သေချာရင်တော့ …. မြန်မြန် ယောင်္ကျား ယူထားမှပဲနော်
ရည်းစားမရှိ ၊ ယူမဲ့သူ မရှိသေးတော့လည်း … အငှားပေါ့ …. ;)